PressReader - Isolezwe ngeSonto: 2018-11-11 - Ubonga mcija
Isolezwe ngeSonto - 2018-11-11 - EZOKUNGCEBELEKA -
eyayithungatha abalingisi abasafufusa, ngahluleka kwiTop 10. Yize ngingaqhubekanga kodwa uShona Ferguson owayengomunye wamajaji, wathi uzongisebenzisa kwiRockville Season 4. Nebala wanginika indawo yokuba yisigebengu, ngavela kabili.”
Uke wavele esikhangisweni saseWimpy. Njengamanje unenkampani ebizwa ngeMthaphoqa Production lapho ethuthukisa intsha kwezokulingisa.
Inkampani yakhe, uthi seyenze izinto eziningi phakathi kwazo okukhona iThe Journey ebikhuluma ngohambo lwakhe, umdlalo weshashalazi iKing Cetshwayo Theatrical Society ayesebenza kuyo noXolani Makwakwa, iDeath of Shaka neDevil Autograph.
Usebenze noLindiwe Dube behambela amajele ehlukene bekhuthaza iziboshwa ngezinkulumo ezakhayo.
“Isifiso sami esikhulu esokuthi eminyakeni emihlanu ezayo ngidlale kumafilimu azokhonjiswa kuleli naphesheya, inkampani yami ikhiqize imidlalo emikhulu. Ngonyaka ozayo ngifuna ukukhipha ingoma yegqom’” UMthandeni uzobe engumphathi wohlelo emcimbini Hhhelllooo Decembaaa Family Fun Day and Beer Fest ezoba ngoDisemba 8 eRichards Bay Rugby Club. Kuzobe kukhona uMzokoloko weGagasi FM, Noma Khumalo owawina kuma- Idols, Tutti Grooves nabanye.